Galmudug oo shaacisay khasaaraha ka dhashay qaraxa Gaalkacyo - Awdinle Online
Galmudug oo shaacisay khasaaraha ka dhashay qaraxa Gaalkacyo
Qaraxa oo uu ka dhashay khasaaro dhimasho ah iyo burbur hantiyadeed ayaa waxaa uu ka dhex-dhacay mooto Bajaaj ay saarnaayeen rag la sheegay inay ku xirnaayeen waxyaabaha qarxa, xilli ay marayeen agagaarka Hotelka AMBAS dhanka Galmudug ee Magaalada Gaalkacyo.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriya Isxal oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen Darawalkii Mooto Bajaajta iyo Nin kale oo la saarnaa, isla markaana wax khasaaro ah kasoo gaarain dad Shacab ah.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ragga qaraxa ku dhintay ay doonayeen inay dhibateeyaan Bulshada Gaalkacyo, waxaana uu Shacabka ka dalbaday inay Ciidamada la Shaqeeyaan si naftooda loo badbaadiyo.
Dhinaca kale Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Mudug ayaa dhankiisa sheegay in Ciidamada Ammaanka ay ka hortageen ragga qaraxa uu ku xirnaa, sidoo kalena ay haatan wadaan baaritaano la xiriira halka laga soo abaabulay qaraxa.
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay qaraxyo ismiidaamin ahaa, kuwaas oo qaarkood lagu dilay Guddoomiyihii Gobolka Mudug ee Puntland iyo Saraakiil ka tirsanaa Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo bilaawday baarista Askari si xun loogu dilay Muqdisho
Next articleRooble oo diiday in la-Taliyaha Farmaajo Ee Doorashada kala Shaqeeyo Shirka 20-ka May